Indlela yokugubha isikhwama sezonyango
Kule mihla kukho iintlobo ezininzi zeempawu zokuzicoca, zifumaneke kunoma yimuphi umbala kunye nentsingiselo. Kubaluleke kakhulu ukuba intombazana ibonakale ilungileyo yonke ixesha, ngoko ke kwindlela eya kufuneka ithathe iziqholo kunye nayo, kodwa ke, imilenze kunye ne powder iya kuba yincinci. Nantsi sifuna abahlaziyi kunye neetonal bases, kwaye abanako ukubala yonke into. Ngoko ke, kukho konke oku, kufuneka kubekho isikhwama sokuqhathanisa. Emva kohambo oluhlukeneyo, isikhwama sokuqhenqa singonakalisa, umzekelo, umqubu womlomo, ungagqitha elangeni uze ushiye impawu. Ngaloo ndlela, isikhwama sezonyakatho siya kufuneka sifakwe endaweni. Ukuba uhamba ngokukhawuleza, ngoko ulungele ukugcoba isikhwama sokuzilungisa, ukuze ungathengi entsha rhoqo. Unokwenza i-makeup ngokwakho. Njani ukwenza oku?
Ukuze wenze izikhwama zokuzicoca ngezandla zakho, awuyi kufuna umgudu omkhulu okanye ukuya kuzo naziphi na izifundo ezizodwa. Unokwenza ngaphandle komshini wokuthunga. Enye yeentlobo zeengxowa zezonyango ekhaya likhwama lezonyongweni, zihlanjwe ngesandla kunye neendlela zokuhlobisa.
Ukwenza isikhwama esinjalo sokwenza izimonkwane uzakufuna izinto ezilandelayo:
isalathisi, efunekayo ukwenza ubuso besikhwama sokuzilungisa;
Isalathiso esiya kuba sesikhwameni sezonyakatho (konke kuxhomekeke kwizinto ozikhethele ngaphandle, ukuba zomeleleyo, ngoko kungenjalo ukuba kungaphakathi kukho akumele usebenzise le nto, kuba isebenza njengelinen);
i-latch okanye i-zipper, eyokuvala isikhwama sokuzicoca.
Ngoko ke, indlela elula kukuba wenze isikhwama sokuzilungisa esenziwe ngamacangca. Uzakufuna i-template yamacangca amabini, kwaye ke unokutshintsha kwintsikelelo yakho, engeza phantsi okanye ekhompini okanye uguqule umlo wamacandelo ebhegi yokuzicoca. Kubalulekile ukwazi ukuba umgaqo omnye kufuneka uqaphele: intsimbi yangaphandle kufuneka isongwe ngamacangca ngaphakathi, kunye nendawo yokulala - ihamba ngaphandle.
Ngoku benza iziqholo ezintle kunye neenhle ezivela kwi-denim, kunye nokufakwa okungafaniyo kwimibala enemibala. Ngokubhekiselele kwi-denim, unokuthatha nje i jeans endala.
Namhlanje, izikhwama zokonkcola zifumana ukuthandwa. Oku kunokuchazwa ngento yokuba baqhelanise kwaye bayasebenza. Ubungakanani besikhwama sokonkcenkcesha asiyinto encinci njengesiqhelo, kodwa siya kufumana yonke into oyifunayo.
Kukho iintlobo ezintathu zeemveliso ezizongcolileyo: umzobo ojikelezayo, u-three-dimensional "ngeendlebe", isigxina esisigxina.
Kukho iingenelo kunye nokuphazamiseka kwintlobo nganye. Enye yeempembelelo zesibhakabhaka esicacileyo sokuthi ayilungelekanga, izinto ezifanelekileyo zingabakho phantsi. Ukuqhubela phambili kulo mzekelo, makhe siqwalasele umzekelo wokuvelisa isikhwama se-cosmetic esikhwameni esingummiselo. Ukuhluka okunikeziwe akuqhelekanga ngokwaneleyo: isikhwama sokulungisa isisombululo singakunikwa ngokupheleleyo, kwaye ngaphakathi ngaphakathi kunamacandelo aneengxowa, nangona kubonakala ngathi kufana nesifuba.
Lungiselela isikhwama esinjalo sokuzicoca kwiinqanaba ezi-7:
Ekuqaleni, kufuneka ukhethe ityiti eninzi, efunekayo kwicala eliphambili, mhlawumbi i-suede iyakwazi. Kuyinto enqwenelekayo ukukhetha izinto ezivela kumbala ofanayo, kuba iifokgi ziza kudalwa ukusuka kwimbumba yembumba. Ukwenza umlo wesifuba, phakathi kwephambili nangaphakathi ngaphakathi ubeka uboya bentambo okanye isono.
Zonke iindawo kunye neenwele zifana nobukhulu obufanayo (i-template iyinxande, ubukhulu bayo bungama-38/19 cm okanye 40/20 cm), kufuneka bonke baqeshwe kunye.
Isigaba sokulungisa i-beika, esiqhotyoshelwe kwicala langaphambili.
Ukuveliswa kweengxowa ezisetyenzisiweyo (kufuneka zingabi ngaphezu kwe-3x), ubukhulu bungama-38/24 cm. Iingxowa ziya kugcinwa kwi-lace, ngoko inxalenye ephezulu ifakwe kwi-kuliski.
Ukugqitywa kweengxowa kuqhutyelwa ngoncedo lwenaliti ebenza bafikelele emacaleni endlu yangaphakathi yesibhakabhaka. Into ephambili kukuba unamathele kubo ukwenzela ukuba kukho igumbi le-valve.
Ixesha lokuxotsha. Ukwenza oku, kufuneka uguqule isikhwama sokuzicoca uze ugwebe ukubhaka, ngoko, kunye ne-tape, ubeke imida yeengxowa, ezokukhusela isikhwama sokwenza kunye neengxowa. Imida yeengxowa ziyakwandisa ngaphaya komda, ngoko ke yonke into eya kuba ngaphandle kufuneka inqunywe. Emva koko kuyimfuneko ukuguqula i-crochet kwaye kwakhona ukuyihlawula kwicala elingafanelekanga, okuya kwenza ukuba ukwazi ukufihla imisila etyunjiweyo yeengxowa.
Isigaba sokugqibela siyilo lesikhwama sokuzilungisa. Ukulungelelana kunye nobuhle, unokubambisa ipeni.
I-Beautician eyenziwe yesikhumba
Ukwenza isikhwama esinjalo sokonkcenkceshela, isikhumba esilula nje kuphela sifanelekile. Ekubeni ulusu lukhuni kakhulu, i-lining ayifanele kwenziwe, kodwa lo mgaqo awusebenzi kwi-bag makeup. I-Beautician-chest iyinqobo kunye nekhwalithi ephakamileyo, ukuba usebenzisa isikhumba esithambileyo nesincinci sombane, umzekelo, kunokuthathwa kwiiglavu. Iinjongo zezo zimonyo ziyimizila yenkonzo (ukumelana nokuguga kwexesha elide) kunye neempawu zobugcisa.
Iimveliso zendalo yase-Autumn eyenziwe ngezinto eziphathekayo zendalo kunye nesikole
Iingcali eziphambili kwizikolo zaseprayimari ngo-Matshi 8: iiklasi zeeklasi kunye neefoto kunye namavidiyo
Iingcamango zokuqala zePasika: siphuca amaqanda ngePasika ngezandla zethu
Indlela yokuguqula umdlalo kwi-shishini elinenzuzo?
Intsapho enkulu kunye neengxaki zayo eziphambili
UAnton Kamolov, ubomi bodwa
Intombazana ingena njani kwincoko kunye nomfana?
Iisobho zeHawaii kunye neHanoverian?
Izinto eziphambili ebomini: njani ngokuchanekileyo ukulungiselela?
Ikhonkco leMbali kwihostela
Inkukhu ethosiweyo kunye neziqhumane
Ukufunda ukwenza umntu ongaqhelekanga
ICarp ibhaka ibhakoni
Iigwele ngeerspberries kunye ne-ricotta
Iibhisikidi kunye ne-tshokoleta kunye ne-hazelnuts
Iziphumo zenkqubela kaLamoda "Umfanekiso ovela kwiphepha"
Umaski wokuphela kwemida: umrhumo wasekhaya wezinwele ezinonophelo ebusika
Abantwana abane-HIV-ingxaki kuluntu
I-Icelandic moss isityalo sonyango
Isondlo somama ngexesha lokuncelisa